Qaybaha birta ah ee xaashida ah qaybo ka mid ah warshadda iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ouzhan
Qaybaha birta ah ee xaashida waxaa ka mid ah sifaynta iyo sifaynta. Nadiifintu waxay isticmaashaa warbaahinta khilaafaadka sida warqadda ciida, bambaska, iyo budada dhagaxa fiican si ay u xoqdo dusha sare ee shayga dusha sare leh ama filimka dahaarka leh. Nadiifintu waxay isticmaashaa waxyeelo farsamo, kiimiko ama koronto si loo yareeyo culeyska dusha sare ee qalabka shaqada si loo helo dhalaal. Habka waxqabadka ee dusha sare.
Go'aan bir biraha kartoo iyo shiidi qaybo-sax sheet bir qashin iyo shiidi qaybo mishiino processing
Qaybaha birta xaashidu waa alaabooyin lagu farsameeyo tiknoolajiyada birta ah. Ma sameyn karno la'aanteed qeybaha birta ah meel walba oo nolosheena ah. Qaybaha birta xaashidu waa iyada oo loo marayo birta fiiqan, goynta leysarka, farsamaynta culus, isku xidhka birta, sawir biraha, goynta plasma, iyo alxanka saxda ah. Roll la xirrira, sheet sheet laabaya la xirrira, dhinto been abuurtay, goynta jet biyo, alxanka sax. Birta xaashida waxaa lagu qeexaa: birta xaashida ahi waa geedi socod qabow oo dhameystiran oo loogu talagalay xaashiyaha birta ah (badanaa ka hooseeya 6mm), oo ay ku jiraan xiirashada, feer / goynta / isku darka, laabashada, alxamida, jeexitaanka, kala bixida, iyo sameynta (sida gawaarida gawaarida). Muuqaalkeeda xuska leh waa dhumucdiisuna waa isku mid. Waxyaabaha birta xaashidu waxay leeyihiin astaamaha miisaanka khafiifka ah, xoogga sare, habsami u socodka korantada, qiime jaban, iyo wax soo saar tiro badan oo wanaagsan. Waxay leeyihiin adeegsiyo ballaaran.
Falanqaynta birta xaashida ayaa si ballaaran loogu isticmaalay dhinacyada elektaroniga, isgaarsiinta, warshadaha baabuurta, iyo qalabka caafimaadka. Tusaale ahaan, kiisaska kumbuyuutarka, taleefannada gacanta, iyo MP3, biraha birku waa qayb aan lagama maarmaan ahayn. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo isticmaalaa soo saarista qalabka caafimaadka, waxaana sidoo kale loo adeegsadaa gawaarida iyo gawaarida (gawaarida) meydadka, fuselageska diyaaradaha iyo baalasha, miisaska caafimaadka, saqafka dhismaha (dhismaha) iyo codsiyo kale oo badan.
Faa'iidooyinka Shanghai Ouzhan sheet bir safeeyey iyo qaybo qalabaynta safeeyey
Qalabka mashiinka wax lagu nadiifiyo ee birta ah
Nidaamka ugu muhiimsan Nadiifinta birta iyo xajmiga birta
Hore: Qaybaha birta ah ee xaashida ah
Xiga: Qaybaha birta xaashida shaabadaysan